Could you check itf- Английский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: could you check it for me (Английский - Бирманский)
My mum told me it was hard to find food for me.
ကျွန်တော့်အတွက် အစားအစာရှာရဖွေရတာ အရမ်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့။
ထိုအမှုကိုနားလည်ရအောင် ဆင်ခြင်သောအခါ အလွန်ခက်သည်ဟု ထင်ပါ၏။
It is not interesting for me to work with colleagues here and I do not envision any development.
ဒီကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမှ မျှော်မှန်းလို့မရသလို ကျွန်မအတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းတော့ဘူး။
အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်စေခြင်းငှါ၊ အကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခံရသော ကျေးဇူးသည် ကြီးပါ၏။
Has the sacredness of life become less sacred for me?
စစ်ပွဲဟာ ကျွန်ုပ်၏ ဝိဉာဏ်ကို လုံး၀ ညစ်ညမ်းစေခဲ့ လေလား။
သန့်ရှင်းသူတို့ကို လုပ်ကျွေးခြင်၏ အမူအရာများကို သင်တို့အား ငါရေး၍ကြားလိုက်သော် အကျိုးမရှိ။
ငါသည်ဝါကြွားခြင်းကိုမပြုသင့်လျှင်၊ သခင်ဘုရားပြတော်မူသော ထူးဆန်းသောရူပါရုံနှင့် ဗျာဒိတ် တော်များကို တဖန်ပြောဦးမည်။
Could you touch the other person's hand without takingastep towards that person?
တစ်စုံတစ်ဦး၏ အနားသို့ တိုးကပ်မသွားဘဲ ထိုသူ၏ လက်ကို ထိကိုင်နိုင်ပါသလား။
ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်မြို့ကို ရွေးကောက်၍၊ အမြဲနေတော်မူရာဘို့ အလိုတော်ရှိသည်အရာမှာ၊
မာနကြီးသောသူ၊ ကိုယ်တော်၏ တရားကို လွန်ကျူးသော သူတို့သည် အကျွန်ုပ်အဘို့တွင်းများကို တူးကြပါပြီ။
ငါသည် ကိုယ်ဥစ္စာကို ပြုလိုသမျှမပြုရာသလော။ ငါ့သဘောကောင်းသောကြောင့် သင်သည် မျက်မုန်း ကြိုးရသလောဟု ဆိုလေ၏။
ငါမူကား၊ ဘုရားသခင်ကို ပဌနာပြု၍၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ကယ်တင်တော်မူမည်။
ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခိုလှုံရာ၊ ရန်သူတို့ရှေ့မှာ ခိုင်ခံ့သော ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏။
ငါသည်အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၊ ငါ့အမှုကို ပြီးစီးစေတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို အော်ဟစ်မည်။
သင်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ တိုးပွားဝမ်းမြောက်မည်အကြောင်း၊ ငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေ၍ သင်တို့ရှိသမျှနှင့် ပေါင်းဘော်ရမည်ဟု ငါသိ၏။
သင်ထ၍ နိနေဝေမြို့ကြီးသို့ သွားပြီးလျှင်၊ ခြိမ်း ချောက်သောစကားနှင့် ကြွေးကြော်လော့။ ထိုမြို့ပြုသော ဒုစရိုက်အပြစ်သည် ငါ့ရှေ့သို့ တက်လာပြီဟု မိန့်တော်မူ ၏။
ဤဆီမွှေးကို ငါ့ကိုယ်အပေါ်၌ သွန်းလောင်းသည်မှာ ငါ့အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်မည်ဟု ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ပြုသတည်း။
အကျွန်ုပ်မူကား၊ ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ ချဉ်း ကပ်၍ အကျိုးရှိပါ၏။ အမှုတော်ရှိသမျှတို့ကို ကြားပြော ခြင်းအလိုငှါ၊ အရှင်ထာဝရဘုရား၌ ခိုလှုံလျက်နေပါ၏။
မတရားသော သူတို့သည် အကျွန်ုပ်ဘို့ ကျော့ ကွင်းကို ထောင်ထားကြပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ ကိုယ်တော် ၏ ဥပဒေသများမှ လွှဲ၍ မသွားပါ။
nakakainis na (Тагальский>Японский)kagat ng higad (Тагальский>Английский)wala ka bang gagawin ngayon (Тагальский>Английский)directora en quechua (Испанский>Кечуа)wala akong natanggap na mensahe (Тагальский>Английский)मुंह बंद रखो (Хинди>Английский)परवर्ति (Хинди>Английский)naturaleza (Кечуа>Испанский)tot morgen (Голландский>Английский)jangan memotong barisan (Малайский>Английский)tino pai reka (Маори>Английский)naipit (Тагальский>Японский)volveranacer (Испанский>Латинский)j'en ai rien à foutre (Французский>Английский)foča (Английский>Русский)di ko kilala (Тагальский>Себуанский)gebietskörperschaft (Немецкий>Итальянский)hora est de somno surgere (Латинский>Английский)la plus que lente (Французский>Английский)nostalgie quand tu nous tiens (Французский>Английский)bendera berkibar (Малайский>Английский)menstrual cramps (Английский>Телугу)nescio quid sit amor (Латинский>Английский)コメントは (Японский>Французский)pag usapan (Тагальский>Английский)